Isitudiyo sokubuka ichweba lase-Akaroa, sihlanzekile ngokugqamile futhi sithokomele
Akaroa, Canterbury, i-New Zealand
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Charlotte
Isitudiyo sokubuka ichweba lase-Akaroa siyindawo elula, ekhanyayo esanda kulungiswa. Isitudiyo sithokozela ukubukwa okungaphazamiseki kwechweba elihle lase-Akaroa ngaphakathi nangaphandle kwedekhi yangasese. Uzozizwa ukhululekile futhi usekhaya unombhede wendlovukazi onethezekile, indawo yokuhlala kanye nekhishi elimiswe kahle. Isitudiyo siwuhambo lwemizuzu emi-5, noma uhambo olujabulisayo lwemizuzu engama-20 ngomgwaqo osogwini oluya enkabeni ye-Akaroa. I-studio nayo inekamelo lokulala elinama-bunks futhi izofanela imibhangqwana noma imindeni enezingane ezincane ezi-1 noma ezi-2.
Isitudiyo sokubuka ichweba lase-Akaroa sisanda kulungiswa futhi sinefenisha emnandi. Lesi sikhala sihlanganisa ikamelo elikhulu elinombhede wendlovukazi onethezekile onokotini othambile othandekayo nezingubo zokulala zelineni. Kukhona nendawo yokuhlala, enosofa abasha nezihlalo ozokwazi ukuhlala khona uhlele usuku lwakho, noma uphumule kusihlwa. Ikhishi liqokwe kahle, linazo zonke izinto ezintsha zikagesi ezihlanganisa i-oven countertop, i-induction hob, izinto zokusika nezinto zokupheka ukuze uzizwe usekhaya. I-studio inomshini wekhofi we-nespresso, ngoba ikhofi enhle ibalulekile, ikakhulukazi uma useholidini. Lesi sikhala siholela emphemeni ovulekile onetafula lokudlela nezihlalo kanye ne-BBQ ukuze ukwazi ukupheka nokudla ngaphandle ngokwenza okuhle ngokubuka okumangalisayo. Isitudiyo sokubuka ichweba lase-Akaroa sinendlu yokugezela ehlukile eneshawa enamandla. Kunamathawula amahle amhlophe aluhlaza, ishampoo nensipho, nokomisa izinwele. I-studio inekamelo lokulala elihlukile elinemibhede ye-bunk elungele ingane eyodwa noma ezimbili ezincane.
- Okusanda kulungiswa
- Umbhede onethezekile onokotini othambile nezingubo zokulala zelineni
- Amathawula amhlophe aluhlaza
- I-wifi yamahhala ne-TV ene-Netflix yamahhala
- Igumbi lokugeza eline-shampoo nensipho, nesomisi sezinwele
- Ikhishi eline-countertop oven, i-induction hob, ifriji/isiqandisi, igedlela, i-toaster, amabhodwe namapani, okokusika nezitsha.
4.99(187 okushiwo abanye)
4.99 · 187 okushiwo abanye
Isitudiyo sokubuka ichweba lase-Akaroa siyimizuzu emi-5 yokushayela noma uhambo lwemizuzu engama-20 ukuya enkabeni ye-Akaroa. Siyayithanda indlela yokuhamba - kuzokwehlisa endleleni yokuhamba yomphakathi udlule etsheni lesikhumbuzo lase-Britomart ukuya e-Glen Bay enokuthula, lapho kunobhishi olunamatshe okuyindawo yethu esiyintandokazi yokubhukuda kanye ne-kayak phakathi nezinyanga zasehlobo. Ukusuka lapho, kuwuhambo olujabulisayo ngomgwaqo osogwini oludlula i-Akaroa lighthouse yomlando ukuya edolobheni. Isitudiyo sokubuka ichweba lase-Akaroa sizizwa sisondele ngokwanele kuso sonke isenzo, nokho sithulile futhi siyimfihlo futhi sijabulela ukubuka okungaphazamiseki kwechweba elihle lase-Akaroa namagquma azungezile.
I-Akaroa icishe ibe ngamahora angu-1.5 ukusuka e-Christchurch.
Istudiyo siseduze kwendlu yethu, kodwa singasese sinesango laso lokungena kanye nezindawo zokupaka ezingaphandle komgwaqo. Sizoba sestudio ukuze sikubingelele mathupha lapho ufika, noma okhiye bazotholakala ebhokisini lokukhiya futhi sizokuthumelela ikhodi ngaphambi kokuba ufike. Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho, kodwa uma unemibuzo noma ungathanda usizo, sivele sikushayele ucingo.
Istudiyo siseduze kwendlu yethu, kodwa singasese sinesango laso lokungena kanye nezindawo zokupaka ezingaphandle komgwaqo. Sizoba sestudio ukuze sikubingelele mathupha lapho ufika,…
Hlola ezinye izinketho ezise- Akaroa namaphethelo